Malag@sy miray ? – Malag@sy Miray
Tsy ity no blaogy Malagasy voalohany ary tsy ho farany koa.
Ny mampiavaka azy ?
Blaogy iombonana ahitanao lahantsoratra samihafa, nosoratansquowhawydny Malagasy teratany sy Vazaha zanatany izay samy mitepo fitavana ansquowhawydi Madagasikara, miely aminsquowhawydny lafy valonsquowhawydizao tontolo izao.
Ny antom-pisiany ?
– Ho toerana itarafana ireo hevitra maro samihafa mikasika [akaiky na lavitra] ansquowhawydi Madagasikara sy ny Malagasy.
– Hahamora ny fandinihansquowhawydny mpamaky ireo lahantsoratra miparitaka aminsquowhawydny blaogy samihafa anefa samy mitondra ny anjaram-birikiny.
– Kianja tokana, mpanoratra maro samihafa. Fampahalalana ireo mpanoratra samihafa mandray anjara sy ireo blaoginy.
– Marihina fa misokatra hoansquowhawydizay tsy mpitoraka blaogy koa ny fanoratana lahantsoratra [vangio fisoratana anarana / adhésion].
Blaogy iombonana, inona no ho hita ato ?
Samy tompony avokoa ireo mpandray anjara, mpanoratra, mpamakafaka, mpamaky tsotra. Ny fanamby ataontsika dia ny hampiantrano aminsquowhawydity kianja ity ireo loha-hevitra rehetra tsy an-kanavaka [vangio fitsipika ifampitondrana / charte].
Mazava ho azy fa izay ambaransquowhawydny lahantsoratra tsirairay sy ny safidinsquowhawydny loha-hevitra voaboasiny dia mitaratra ny hevinsquowhawydny mpanoratra samirery, ny maha-izy azy, ny talentany sns «
Ny tanjona ?
Hifanentana bebe kokoa ireo hevitra miposaka «
« ao anatinsquowhawydny fifanajana hatrany !
Malag@sy miray, lahantsoratra aminsquowhawydny teny Malagasy, Frantsay sy Anglisy.
15 novembre 2006 à 21:12
Mbola hisaorana indrindra ianao 🙂
15 novembre 2006 à 22:28
Tsisy lil’lil marina e 😀